Umkhethe kunye nokungaqondi malunga ne-iOS | IPhone iindaba
ULuis Padilla | | iOS, Ezahlukeneyo
Andikuthandi ukuthelekiswa, kuncinci xa ndizama ukuthelekisa iimveliso ezinje ngo "buqu" njengenkqubo yokusebenza. Kungenxa yokuba into emnandi komnye umntu isenokungabinamsebenzi komnye, kwaye ndiyakholelwa ukuba umsebenzisi ngamnye kufuneka akhethe inkqubo ehambelana neemfuno zabo, kwaye afumane okona kulungileyo. Oogxa bethu abavela kwi-Androidsis, iwebhusayithi yodade we-Actualidad iPhone kodwa ejongene nemicimbi malunga nenkqubo yokusebenza kweGoogle, bapapashe inqaku elithelekisa i-iOS ne-Android, kwaye ucacise ukuba kutheni le yokugqibela igqithile kwi-Apple.
Kungenxa yesi sizathu sokuba ndigqibe kwelokuba ndibhale eli nqaku ndibonisa umahluko ophambili wento Android phambi kwe iOS uphuma ophumeleleyo kwaye ngodliwo.
Ukufunda inqaku andinakukunceda kodwa ndicinge malunga nenani leempazamo malunga ne-iOS eziphindaphindwa rhoqo. Ke awufuni kuphoswa zama ukubonisa indlela encinci eyaziwa ngayo i-iOS nokuba ingakanani into ekuthethwa ngayo kwaye ibubuxoki.
Olunye lweempawu eziphambili zoko Android ivelele malunga iOSNgokoluvo lwam, yinto enokwenzeka yokufaka usetyenziso lomntu wesithathu ngaphandle kokwenza naluphi na uhlobo lwe Ukuqhekeka kwejele.
Ngaphandle kwamathandabuzo umbhali wenqaku uyisebenzisa gwenxa intetho ethi "Ukusetyenziswa ngumntu wesithathu." Ngokwenene iya kuthetha "izicelo zomntu wesithathu ezingekho kwivenkile esemthethweni". Ukungahoyi le mpazamo, le ngxelo ichanekile. Kwi-iOS awukwazi ukufaka usetyenziso olungekho kwiVenkile yeApple (ngokusemthethweni, ngaphandle kokuqhekeka kwejele). Ivenkile yeVenkile ibethe usetyenziso lwesigidi ngo-Novemba ophelileyo. Nangona izicelo "ezingafanelekanga" ngamanye amaxesha zingena, ziyiminyhadala ethile, kwaye umgangatho yinto eqhelekileyo, nangona phakathi kwesigidi sesicelo siza kufumana ezinye ezingafanelekanga, kusengqiqweni. Ndingatsho ukuba ngezo zicelo zizigidi zezinto ezifunekayo ngaphezulu, kodwa iya kuba bubuxoki.
Ukuba sifuna ukufaka usetyenziso olungekho kwivenkile esemthethweni, kuyinyani ukuba kuyimfuneko kwiJailbreak. Kuyafana nokutshintsha imbonakalo yesiphelo, Elinye lamanqaku akhetha i-Android ngokombhali wenqaku.
Enye yezinto endizithandayo yeyona nto yayinokwenzeka kukutshintsha ukubonakala kwayo ngaphandle kwemfuneko yolwazi Jailbreak okanye nayiphi na into enjalo, engenakwenzeka kwinkqubo yokusebenza ye iapile ngokuba athwalekayo.
Yinto endiyifumanisa inomdla kakhulu, kwaye endiyifunda rhoqo. Ihlala icetyiswa ukuba ukwaphuka kwejele kuyinto enzima kwaye inobungozi, xa inyani yileya ilula njengokufaka isixhobo sakho kwaye ucofe iqhosha kwisicelo sekhompyuter. Ngamanye amaxesha kuye kwenzeka ukukwenza oko kwisixhobo ngokwaso. Kwaye kwimeko engalindelekanga yokuba le nkqubo isilele, isixhobo siyabuyiselwa kwaye sizame kwakhona, ngaphandle kwengxaki enkulu. Nangona kunjalo, abo bathi oku, qinisekisa kungekudala emva koko ukwenza "Ingcambu" kwizixhobo zabo kuyinto elula, engabandakanyi umngcipheko.
Nangona kukho ukungafani, ezona modeli zibalaseleyo kunye neziphumeleleyo ze-Android kulula ukufikelela kuzo. Ingcambu kwaye ufake ifayile Ukubuyiselwa kwakhona Apho siya kuthatha ulawulo olupheleleyo lwezixhobo zethu.
Ngaphandle kolwazi lwam olunqongopheleyo lwe-Android, ndiyazi ngokwaneleyo ukuba musa ukuwela kwimpazamo yokuthelekisa ingcambu kunye neJailbreak. Ndiyazi kakuhle ukuba azifani, kodwa into ongenakuyenza "yidemon" enye kwaye udumise enye, okanye uthethe nge-iOS rhoqo ngaphandle kweJailbreak emva koko uthethe ngobuhle be-Android ngeRoot eyenziwe. Nokuba siyalinganisa iimeko okanye asidlali.
Kwaye ke, iTunes "El Temido" kwafuneka ifike. Inkqubo yolawulo lwe-multimedia ka-Apple sele igutyungelwe ngobuninzi bobuxoki obungenakukwazi ukucocwa ngaphandle kokuba iApple yenze "isileyiti esicocekileyo." Kwaye into yokuba nabani na osebenzisa i-iOS kufuneka ahambe nge-iTunes kuyo yonke into yenye yazo.
Le ayisiyiyo imeko kwi iOS, kwaye kukuba nako ukwenza naluphi na uhlobo lolawulo kwiiterminal ze iapile kuyakufuneka sidlule ebunzimeni obaluka kubo iTunes, isoftware enzima yabantu abangenamava kwikhompyuter yomsebenzisi.
Ndiyaphinda, kwaye andizukudinwa kukuyiphinda: Ubuxoki, ubuxoki ngokupheleleyo. Ukutsho oko kukubonisa ukuba i-iOS khange isetyenziswe kangangeminyaka, kuba ukuba uyafuna, awudingi ukuba ne-iTunes konke konke kwikhompyuter yakho. Unokuzikhuphelela usetyenziso ngaphandle kwe-iTunes, ungenza iikopi ezikhuselweyo kwaye uzilayishe kwi-iCloud, unokukhuphela umxholo we-multimedia (iividiyo, umculo, iimuvi ...), enkosi kwi-iCloud sinokuvumelanisa amaxwebhu phakathi kwezixhobo zethu kunye nekhompyuter yethu, Singakwazi nokuhlaziya kuhlobo lwamva nje olukhoyo okanye sibuyisele isixhobo kwimeko yombane kwaye sifumane ikopi yogcino, nayo yonke into, yonke into ngaphandle kokudibanisa i-iPhone yethu okanye i-iPad kwikhompyuter ukuze isebenzise i-iTunes.
Ngokuqinisekileyo, uninzi lwenu luya kucinga ... "Kwaye ndiyibeka njani imovie endiyikhupheleyo kwi-intanethi ngaphandle kwe-iTunes?" Kodwa asithethi ngokuqhekeza, ubuncinci mna. Kuthekani ukuba sine-DVD bhanyabhanya kwaye sifuna ukuyidlulisela kwi-iPhone? Ewe, njengoko kuya kufuneka uyenze kwi-Android, kuya kufuneka uyithumele kwikhompyuter yakho emva koko uyikhuphele kwisixhobo sakho, kwaye awuzukuyibeka kwifomathi ye-iTunes kuba ngenxa yesicelo somntu wesithathu, iifomathi eziqhelekileyo zinako idlalwe kwisixhobo sethu se-iOS.
Yintoni oza kuphawula ngayo Bluetooth de iOS?, isixhobo sokwabelana ngokulula iifayile ezisebenza kuphela kwizinto ezimbalwa kwi-iOS, dlulisa ifoto, unxibelelwano kunye nenye into encinci.
I-Bluetooth ye-iOS isetyenziselwa ukuqhagamshela kwi-hands-free yemoto yethu, okanye nakulo naluphi na uhlobo olungenazandla, okanye ukunxibelelana naso nasiphi na isithethi esinolu hlobo lonxibelelwano kwaye wonwabele umculo wethu, okanye wabelane nge-intanethi nezinye izixhobo , okanye ukudibanisa ikhibhodi engenazingcingo ... Ngokwenene yiBluetooth esebenzayo ngokupheleleyo, kodwa inomda wokudluliswa kwefayile, yinto yokwenene leyo kwaye asinakukhanyela. Uninzi lwenu lunokubona kule fayile yokuhambisa umsebenzi into esisiseko, kodwa ayisiyonto yam leyo. Kwi-iOS unokuba neBluetooth esebenzayo ngokupheleleyo, enkosi kwiJailbreak kunye nezicelo ezinjengokwabelana ngeBlue Blue. Ndinesicelo kwisixhobo sam, ngaphambi kokuba ndibe noCeleste, naphambi kweBlueNova, kwaye zezona zimbi zimbi endizityalileyo kwisixhobo sam, kuba ngaphandle kokwenza iitutorials andikaze ndizisebenzise. Ngaphandle kokufumana ithuba, ndihlala ndisebenzisa ezinye iindlela ezinje nge-WhatsApp, Line okanye ndiyithumela nge-imeyile. Kodwa njengoko benditshilo ngaphambili, ngumbandela wokungcamla.
Njengoko benditshilo ekuqaleni, Andifuni ukukholisa nabani na ukuba i-iOS ingcono kune-Android, okanye ngokuchaseneyo. Ngamnye makenze ukhetho kwaye ayonwabele ngokupheleleyo. Kodwa olo khetho kukwazi kakuhle ukuba iqonga ngalinye libonelela ngantoni, eyiyeyona ndlela yokwenza izinto.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Android kunye ne-iOS, kutheni ndinamathela kwi-Android?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Umkhethe kunye nembono ephosakeleyo malunga ne-iOS
Izimvo ezi-87, shiya ezakho
IBhetelehem  sitsho
Kukhulu kangakanani. Mna, ndinamava kuzo zombini iinkqubo zokusebenza, ngoku ndine-iOS kwaye ndivela kwi-android, ndihlala ne-iOS amaxesha aliwaka, yiza, NGAPHANDLE KOKUKHALALELA. Okokuqala, kwaye njengoko usitsho, umba wokuqhekeka kwejele kunye nengcambu yahluke KAKHULU. Khange ndikwazi ukwenza i-ROOT, ndiyibona inzima kwaye inzima, ngelixa i-JAILBREAK kukunika iqhosha elilula kwikhompyuter nakwiselfowuni, kwaye ungayenza ngaphandle koloyiko, kuba nangayo nayiphi na ingxaki, hayi nokuba ubuncinci kangakanani na., ungasoloko ubuyisela kunye ne-ale, ukulungele ukuzama kwakhona. Ngokubhekisele kumcimbi weBluetooth ... ndiyahleka, kuba AKUKHO BHODI okanye KAKHULU akukho mntu usebenzisa 'oko' ngoku, kuba kulula kakhulu ukwabelana ngeefayile ngewhatsapp, umgca okanye i-imeyile; kodwa ke, i-android kuyakufuneka izikhusele ngento ethile…. Ngapha koko, njengoko benditshilo ekuqaleni ndikhetha iApple kunye ne-iOS.
Phendula Bhetelehem 
mm .. yintoni potazo
UJoseph andrade sitsho
Ndimele nditsho ukuba ndivela kwi-iOS kwaye ngoku ndikwi-android kwaye ngokoluvo lwam ukuba ... i-iOS ingcono kodwa sele iyadika ukusoloko ndibona intwasahlobo enye kunye neapile ekhawulela yonke into, nazo iimodeli ezindala ziyazishiya emva ngasemva ...
Ilifa kwi-ICS lolunye uhlaziyo lwamva nje olukhoyo, kwaye ngayo yonke imisebenzi engafaniyo ne-iOS nangona ungafikelela kwi-iOS7 nge-3GS baya kuhlala bethatha ezona zilungileyo, ngokungathi bakunike amaphephadonga amatsha kunye neemenyu, kwi ngokweBluetooth, unyanisile akukho mntu uyisebenzisayo xD, kunye nengcambu apho ukuba uyaphazama ubuncinci mna, yonke i-android yam, ndicofa nje usetyenziso lwePC nakwi-android yam ndichukumisa »Buyisela idatha» ndiyilindile Ukuqala kwakhona kwaye yile nto, kwiibanjwa ezidlulileyo bekufuneka ubeke i-DFU kunye nokubaleka mmm ngokungeyomfuneko ukuba uthethe ... linda ide i icon iphume ... andiyiyo fanboy, ndathi i-iOS inamandla ngakumbi kodwa uluvo lusemva ngenxa yokuba lunqongophele, kufuneka nditsho ukuba utshintsho kuyilo kwi-iOS 7 aluzukufezekisa okuninzi ... Enkosi ngokufunda
Phendula kuJose andrade
Ndiyavumelana nawe. I-iOS iswele inkululeko yokusebenzisa kunye nokuba umsebenzisi unoxanduva. Ndandinengxaki yokubaleka ejele kwaye ayisafani, i-cydia nayo isemva kuyo yonke le nto.
Ngokoluvo lwam, i-Android kunye ne-iOS kufuneka babumbane kwaye benze inkqubo eyomeleleyo kunye nesimahla (le yasimahla sisiqingatha kuba ndiyakholelwa ukuba ukupapashwa kwezicelo kufuneka kudlule kwisihluzi kungabi nzima njengeApple kodwa uninzi aluyeki ukudlulisa iiapps ezisebenzayo Iyabulala kwi-Android).
Umzekelo, kwifowuni ndithanda i-iOS ngakumbi kukhuseleko lwayo nakwiThebhulethi ndikhetha i-Android ngenkululeko yayo yokusebenzisa.
Vumelana nawe, thixo wam !!! ndide ndafumana umntu ongengomntu othanda ifani
Phendula ku Chavo
Inkululeko engekhoyo i-iOS ayikokukhusela umsebenzisi ekonakaliseni inkqubo yokusebenza, kukukhusela umnini zabelo kwinkampani ekulahlekelweni yimali yenkululeko yokuthenga apho bafuna okanye bafake ngaphandle kwemvume, kodwa apha abanye abasebenzisi bayayikhusela inkampani njenge ukuba babenesabelo, bayakuhleka.
Ukuchasana kwenzeka kum, kuba usuku nosuku ndikhetha inkululeko ye-android, kuyinto exabisekileyo ukukwazi ukwenza phantse nantoni na onokuyenza ngeelaptop kanye xa uyifuna, nangona kunjalo kumacwecwe ndikhetha ios ngenxa yokuba ikhethekile Iipilisi banika iwaka lokujika kulawo playstore kunye nokusetyenziswa endikunikwayo kwithebhulethi (iihlaya, i-intanethi, iimuvi zeposi) ayifuni inkululeko engaphezulu endinokuyiphosa ngokungathi iyenzeka kum ngeselula.
Phendula u tiamath
Leo: "i-android kuyakufuneka izikhusele ngento ..." kwaye ngaphandle kokuyeka ukufunda, umntu uyazibuza. Khusela ntoni? Ngaba le yimfazwe engcwele apho umntu anokonwabela isixhobo sakhe, nokuba kuyintoni na, ukubeka imbangi yakhe kumhluzi?
Andazi, kodwa ndizifundile ezi foram kunye nezo zingaphaya kwaye amaxesha amaninzi ndiyazibuza ukuba iteknoloji sisiseko esitsha senkolo ethandekayo, umahluko wokuba oothixo ngoku banamagama ohlukeneyo: Sony, Apple, Samsung, Htc njl.
Ndiyazibuza ukuba zithini na ezi zinto zehlabathi zinoburharha zisinike zona ukuvelisa inqanaba lokunyaniseka nokunyaniseka.
J.Ignacio Videla sitsho
ITunes? Ke ukuba nge-itools ndenza phantse yonke into kwaye kulula kakhulu ukuba ndingathethi ngokwazi ukugcina iifayile kwi-iPhone yam ngokungathi ayikho enye into.
Inkqubo ecetyiswayo kwabo bangayithandiyo i-iTunes
Phendula ku-J.Ignacio Videla
Uyintshatsheli. Ewe unokwenza yonke into ngaphandle kwe-iTunes kunye neenkqubo zomntu wesithathu, apha sonke siyazi okuninzi malunga neekhompyuter. Andibazi abantu bakho abanolwazi oluncinci lwekhompyuter, kodwa mna kubawo, umzekelo, ndichitha yonke imihla emibini ndicacisa i-iTunes kunye nendlela esebenza ngayo inkqubo yefayile. Uqhele ukubeka i-Android yakhe kwaye adlulise iifayile kuyo njenge-USB kwaye xa ezifuna kwi-iPad akazi nokuba angaqala ngaphi.
Ngokukodwa bendineenyanga ezi-6-7 nge-iPhone 5 kwaye yi-PUSSY yokundidlulisela amanqaku eyunithi, ngokuthe ngqo INYATHELO.
Sonke siyazi ukuba ingcambu ilula kakhulu, kodwa masingademokhrasi, into enzima kukwazi ukusebenzisa i-cydia kunye nokufaka ii-tweaks ngaphandle kokuphazamisa ifowuni. Ukwenza i-JB kunciphisa ifowuni, isebenzisa ibhetri engakumbi kwaye ayizinzanga ngakumbi. Uxhasa isaphuli kunye nokufaka ROM kwenza kube ngokukhawuleza kwaye usebenzisa ibhetri ngaphantsi. Ungayichazanga eyokuba AKUKHO Umahluko ngokwezifiso (isigqebelo).
Kwaye masiye kwimibuzo ebaluleke ngakumbi. Ukwenza imisebenzi emininzi, akukho nto imbi njengokuhlala nge-Android apho izicelo zisebenza ngasemva kwaye zithenge i-iPhone 5 (impazamo enkulu). Akukho nto injengokufumana izaziso ezivela kwi-whatsapp, i-imeyile, ... hamba uye kuzifunda kwaye ungabinayo ingxelo, NDIYAHLEKA KWIOS. Ngendlela efanayo, zama ukuthumela nantoni na ngaphandle kokugubungela, ndichithe imizuzu eli-15 ndiphakamisa iselfowuni ngesandla sam ukuze ndikwazi ukuyithumela, kwaye awunakuyithelekelela intuthuzelo ye-Android ukuyithumela kwaye KUPHELA xa kukho ingxelo iyithumela .
Ndifunda isayensi yekhompyuter, ndingumdwelisi wenkqubo, kuzo zombini iinkqubo kwaye bendikhe ndafikelela kwixesha elifanayo (kangangeminyaka emi-4 okanye njalo) kuzo zombini ezi nkqubo kwaye ndiyakuxelela ukuba i-iOS KUFUNEKA IZIBEKE IIBHETRI.
I-PS: Ndidikwe kukungazazi kakhulu ngaphandle kolwazi.
Utata usebenzisa i-iPhone kwaye ngeakhawunti yasimahla yeDropbox uyonwaba ukuphatha izinto zakhe naye ngaphandle kokukhathazeka ngokudlula kwezinto ngespiki.
Ngokubhekisele kuFanboy, ndiyayeka ukuphawula.
Rhoqo billet osikhuphileyo xa «ubudlula apha kuphela» ... UThixo andisindise ekuphoseni iiyure ezifileyo kuzo http://www.androidloqueseapuntocom...
Ngubani othe bendidlula nje? Njengoko benditshilo ukuba ndine-iPhone 5 kwaye ndingumfundi oqhelekileyo weli phepha.
Ndicinga ukuba kufanelekile ukuba wenze ingxelo engeyiyo.
«PS: Ndidikwe kukungazazi kakhulu ngaphandle kolwazi»
Nam ngokunjalo ... unesisombululo othandekayo Asier, xa uzama ukwenza, re okanye mi, uhlala uzinzile eh!?
Kwaye ngakumbi demagoguery. Ngokuqinisekileyo, ukwenza i-JB akucothisi nto, KUBONAKALA. Ndicinga ukuba bekucacile ukuba bendithetha ngokufaka ii-tweaks (enyanisweni ndicinga ukuba senditshilo) okanye ngaba wenza iJB nje? Nje ngenxa yokuba unayo.
Hayi, ndiyayifaka kwaye ndifake ukuguqulwa kwekhowudi, ii-tweaks ezingazisi iinkqubo kwaye ezingacothisi.
Thenga iselfowuni oyifunayo, kodwa ungabahloniphi abahleli okanye abafundi.
Ewe, kunye ne-android ayicothisi ngokwayo, akunjalo? Thatha nasiphi na iselfowuni, shiya umntu ngaphandle kolwazi, kwaye kunyaka we-1 undixelele ukuba kuhamba njani. Yenza okufanayo nge-iphone, emva koko sixoxe ngokusebenza. Xa sele uyizamile, ndixelele.
yintoni le uyitshoyo. Ndicinga ukuba kufuneka ugqibe ukufunda isayensi yekhompyuter ngaphambi kokunika uluvo lwakho….
Ngokuqinisekileyo !!!!!!!!!! 😀
UAlan Gad Manzano Reymundo sitsho
Kuyinyani kuyo yonke into Gonzalo !!!
Kwaye malunga nezi zidenge (hee) ezingezizo ezikweli phepha, ngekhe uzisuse okanye uzicime ???
Phendula kuAlan Gad Manzano Reymundo
Ndikunye nawe malunga nentlonipho kumagqabantshintshi, kodwa hayi malunga nokuba ngowephepha, yonke into iyacebisa ukuba yenziwa ngentlonipho, okanye ngaba uyiklabhu evaliweyo nekhethekileyo?
Nge-Epreli 8, 2013 20:20 pm, uDisqus wabhala:
Akunjalo konke uFrancisco, zonke izimvo zamkelwe kakuhle, ukuba senza oku ngokuchanekileyo kukuseka incoko, emva kokuba zonke iiblogi zethu zingabazalwana 😉
Oo ngendlela, bendingazi ukuba ngabazalwana !! 😱
Ewe, i-Androidsis masithi yi "Iindaba ze-Android"
Ewe, yeyona blog ibalaseleyo nge-Android oya kuyifumana.
Enkosi kwiqabane, ngokufanayo ndithetha ngeendaba ze-iPhone.
Imibuliso kwaye uphile ixesha elide impikiswano esosiba seebhloko.
Kulungile, kodwa kuba andinamdla wokufunda malunga ne-Android, andikaze ndeva nge-Androidsis, ndiyibonile ngaphandle kokulingana haha, nangayiphi na indlela
Hahaha nooo ntc 😛 unyanisile, nangona bendisokolisa ndicinga ukuba iyatyebisa, 👍👏
Ngapha koko, enkosi ngotshintsho lwembono, hamba, ndiza kuthukisa amanqaku ambalwa kwi-Androidsis😎
Inkululeko epheleleyo yokumenza umhlobo, ewe, akukho xesha andizange ndihloniphe nabani na.
Nge-Epreli 8, 2013 20:38 pm, uDisqus wabhala:
Yintlekisa !!! Haha, andikayifundi nokuyifunda 😛 kodwa ndivile ukuba bathetha ngaye
Ngethamsanqa kunye nokufaneleka kwabahleli bayo ngokufunda ngakumbi nangakumbi.
Bendihleli kwi-android iinyanga ezintathu ... kude kube a
Ukuchonga i-iOS. Ubumanzi bezicelo kunye nokusebenza kuyamangalisa.I-Android ilunge kakhulu, kodwa a
Umzuzwana ukuba ukutyibilika nokusebenza kungasafani .. Kwaye ndine-s3.
Asier, ngaba utata wakho uyayazi indlela yokumisela i-android kwaye akayazi indlela yokutsala iifayile ukuya kwi-itunes? I-ITunes inokuphathwa yinkawu eneminyaka eli-1 ubudala, kunye ne-ios yinyanga-3 ubudala. I-Android kufuneka yenze naluphi na uphando lwe-bullshit kwaye ingene kwi-submenus eyiwaka kunye nengacacanga kwaye inomdla, kungasathethwa ke ngomgangatho ombi wezinto ezininzi zokusebenza, umzekelo, ukuba i-Facebook ayikuvumeli ugcine iifoto kwi-reel okanye kwimemori isixhobo, ithumela impumlo…
Njengomsebenzisi oyingcali odiniweyo ekuphatheni amakhulu ezinxibelelaniso, iinkqubo zokusebenza, iimenyu zazo zonke iintlobo, kwaye ndizamile zonke iintlobo zeefowuni eziphathwayo, njenge-iOS nanye. Ungayithanda ngaphezulu okanye ngaphantsi, kodwa ukuba uninzi luyayifuna kwaye luyayithenga, ayisiyiyo ngenxa yokuba abalandeli be-fanboys besitsho abaninzi, kungenxa yokuba bafuna ukulula kunye nokwenza lula ekwenzeni izinto, kwaye i-android ayinikezeli namhlanje. Kukho okuninzi nge-geek malunga ne-4-core processor, izikrini ze-zillion-intshi, kunye nezinye izinto ezingafunekiyo kwisiphelo sendlela "eshukumayo", zonke zihloniphekile, kodwa ukuba ufuna i-smartphone ukuze isetyenziselwe imihla ngemihla (imeyile, isurif, thumela imiyalezo, fowuna , njl ...) akukho namnye othanda iphone. Kwaye bayazi ukuba apha nakwi-China eyaziwayo.
Ndinawe. Enye yeempawu ezintle zeApple kukusebenziseka kwayo ngokulula. iTunes ilula kakhulu, phantse ikunika yonke into eyenziweyo. Ukuqhekeka kwejele akunanto, liqhosha elilula, ngelixa usenza ingcambu .. yoyikisa. Ndikhetha i-iTunes kaliwaka ngaphezulu kwe-android kwaye ndiyidibanise nekhompyuter kwaye ndibone iwaka kwifolda kwi-SD. Ndivela kwi-android njengawe (Asier) kwaye ngoku ndinayo i-iPhone kwaye andizisoli nakancinci, kwinto endivumayo kukuba kuWhatsApp xa ingxelo ilahlekile awukwazi ukunika iqhosha lokuthumela, kodwa andikholelwa ukuba oko Isiphoso sika-Apple, ukuba asiyompazamo kaWhatsApp… Kwaye andiyongxaki, andiyongcali, njengoko usitsho okanye ucinga ukuba uyi (Asier). Ndithetha ngamava am kuphela.
Iipolisi zePol sitsho
I-Haver, akukho nzima kakhulu ukuyifaka i-android ifowuni nokuba, khangela nje "isikhokelo sengcambu telefonoX" kwaye uya kufumana isikhokelo esineenkcukacha, kwaye xa usenzile kanye, awudingi ukujonga isikhokelo kwakhona. Endaweni yoko ndicinga ukuba, xa ndifunda uluvo lwakho lokuqala kunye nale, ubonakala ngathi uyaliwe kwisayensi yekhompyuter. kusengqiqweni ukuba usebenzise ios
Phendula kwiPol Brrbs
I-iTunes ilula kubasebenzisi abaqaliswe kwisayensi yekhompyuter kwinqanaba lomsebenzisi, kodwa njengoko ichazwe kakuhle kwenye ingcaciso, ichaze umntu omdala okanye ngolwazi oluncinci kwaye uya kubona ngeengxaki ezifumanekayo.
Apple iziyobisi sitsho
iTunes !!! Hehehehe. I-Android ingathanda ukuba nesiqingatha sesicelo esilungileyo njenge-iTunes. Mhlawumbi iiKies zilunge ngakumbi !!!
Anditsho ukuba kubi, ngokuchasene nam kubonakala kulungile kodwa kukhululeke ngakumbi ukurhuqa kwaye ulahle njengakwiAndtoid.
Ngokubhekisele kwiiKies, ndiyavuma ukuba uyaphambana.
Nge-09/04/2013 ngo-23: 42, «Disqus» wabhala:
Isondo? Leyo ineefoto ezingama-982384923 ngenxa yokuba inkqubo ye-super iOS ayikuvumeli ukuba uzigcine ngee-albhamu. Kwaye nditsho ukuba gcina, ungenzi ikopi kwaye uyigcine kwi-reel ngaphandle kokucima (kuba zombini zicinyiwe).
Kwi-Android, awuyi kuyazi indlela yokukhuphela iifoto, ndiyenzile amaxesha aliwaka.
Kwaye ukuba inomdla, kutheni ngalo lonke ixesha ndifuna ukukhuphela iiPDF kwiwebhusayithi yaseyunivesithi, ndidlula ekaKayin?
Kwaye, utata wam ngalo lonke ixesha kufuneka ndimchazele ukuba ukuze agqithise ifolda yeefoto kufuneka asebenzise i-iTunes kwaye avumelanise (ngokutsho kwakho ngoku kulula kunokwenza ikopi kunye nokuncamathisela) kufuneka ndimcacisele, mhlawumbi Utata unenjineli enye, eyam incinci.
I-PS: Ngaba unako ukuya kwi-iOS kwiphepha, ukhuphele imovie / ingoma kwaye uyibone / uyive? (Ngoku umntu uza kuthi kutheni sichasene nobugqwetha)
Ayikwazi ukwenza iialbham kwaye uhambise iifoto? Ndi ... uqinisekile unayo i-iPhone?
Ndingaya kwi-iTunes kwaye ndibukele imovie eshukumayo, ewe. Kuyafana namanye amaphepha kunye neenkonzo.
Ke undibonise ukuba uyayidumisa i-iOS nje (okanye ngenxa yeapile oyithandayo kakhulu), kuba awuyazi nokuba isebenza kanjani. Zama ukwenza i-albhamu, ubeke ifoto kuluhlu olukuyo, kwaye uyicime kuluhlu. Ewe, uye wanyamalala nakwialbhamu.
Ndixelele ukuba andazi ukuba isebenza kanjani i-iOS ...
Ngokugqithisileyo? Ukuba ama-70% esabelo sehlabathi se-Android. Ndizokuvula amehlo akho imiyalelo yenkululeko.
Ngokukhawuleza nje ukuba kube lula, ndiboleke i-Android yam ebantwaneni kwaye bayisusa intombazana eneminyaka eli-9 ubudala yayiyingcali. I-Android ilula kunePC, kunzima kwi-zombie 🙂
Bendihleli ndisebenzisa i-Android ubomi bam bonke kwaye nditshintshela kwi-iPhone yenye yezona zinto zibalaseleyo endakha ndazenza. I-Andoid ikhawuleza iphume kwi-RAM nokuba iphezulu kwaye izicelo ziyawa. Iposi yeposi ihlala isilela kakhulu. Nge-iOS, uvula ii-imeyile ngaphambili kunakwikhompyuter yakho. Ngaba siza kuthetha ngemicimbi yobuhle? Ukuziva nje kokuba une-iPhone kwaye hayi isiqwenga seplastiki kuthetha lukhulu. Into ngokudlula kwezinto kwi-iTunes kwaye njalo ... Ewe, kukukwenza amaxesha ama-2 kwaye sele unayo umatshini, akukubi kangako. Ingcambu kwi-Android kukubila kakhulu andicingi nokucinga ngokwenza into enjalo kwi-iPhone yam, ndinayo yonke into endiyifunayo.
Ndingumsebenzisi we-iOS zombini kunye
I-Android kunye nenkqubo yazo zombini iinkqubo kunye nento yokuqala yokwenza
Kufuneka kuqatshelwe ukuba kwi-Android okwangoku kukho iinguqulelo ezili-17 okanye ezili-18 zenkqubo yokusebenza, eyenza ukuba kube nzima
Inkqubo yokuhambelana nokwahluka okwahlukileyo
iinkqubo. Ngokunjalo kuguqulelo ngalunye into encinci iyasitshintsha kwaye ime
Njengomdwelisi wenkqubo ekufuneka eyenzile
izicelo kule meko zezona zilusizi ukusukela xa kufuneka usinqumamisile isicelo
ayimisi okwesikhashana kwaye xa inkqubo iyivala ngenxa yokungabikho kwememori iyazama
Phinda uvule kwindawo enye apho ndiyishiye khona ngaphandle kokufumana kwakhona idatha
Yintoni ekufuneka icwangcisiwe ukuze kwimeko ethile ivale
ukuxelela iapp ukuba iqale ekuqaleni.
Kukwanokuthiwa unezinto zakhe
kulungile nangona kufuneka ube yingcali ephezulu yokulawula
isicelo kwaye uyeke i-sdk yakho kuba ifuna ikhompyuter enamandla ukuze ikwazi ukuqhuba usetyenziso
kwii-simulators ngokulula kunye nesantya.
Kwi-iOS inkqubo icoceke kakhulu
kwaye eyona nto ibalulekileyo kukuba le uyixelelwayo ukuba uyenze yile uyenzayo
okwenza kube lula kakhulu ukwenza usetyenziso kunye nokuthembeka.
Kukwakho neenguqulelo ezininzi zeenkqubo zokusebenza kwaye ziyabathanda
uhambelane. Nika izimvo zakho ukuba
I-sdk kum yigugu kuba inamanzi kakhulu kwaye ikhawuleza zombini umhleli kunye
Ndihlala ne-iOS ngaphambi kwe-Android
nangona kufuneka iqatshelwe into yokuba iitheminali zezi ziyamangalisa.
Uxolo ngokungakuxeleli. Gxila kwi-Android, funda ngakumbi kwaye uza kubona ukuba indlela ophawula ngayo ingenxa yokungazi kunye nokwenza gwenxa.
I-fanboyada iyonke yomntu onomsindo emva kokufunda elinye inqaku ... Kwaye ke apha ndafunda yonke i-BURRADA kwi-android… Ndine-iPhone 5 kunye ne-S3, kwaye kum i-S3 ayikaze ibhlokelwe, iphelelwe yi-ram..etc
Ayikwazi ukuqothula kwaye ukuba i-jailbreak ... xa zombini zenziwe ngenkqubo kunye neqhosha ... Jonga iiforamu kwaye uzakubona ngaphezulu kwesinye nangaphezulu kwe-2 ukuba emva kokuqhekeka kwejele abakwazi ukubuyisela nge-itunes kwaye i-terminal brikeado, mna nge-jailbreak yokugqibela kuye kwafuneka ndiyenze amaxesha angama-8 kuba emva kwethutyana iphone yam izakuqala ngokutsha, kuye kwafuneka ndilahle ulwazi kwi-iTunes yogcino lwe-jailbreak ukuze lisebenzele mna, nanjengabantu BAM ABANINZI.
Ngelishwa i-90% yama-apile fan ayazi kwaye athetha ngaphandle kwento abayithethayo. Emva koko sikhalaza ngokubizwa ngokuba zii-fanboys kwaye siziphathe kakubi….
Ndingakusa kwisikwere sedolophu ndikunike okwakho ...
Kubi kubi kubi, kubi kakhulu, ndiyayibona le post ngakumbi njengomntu ovuthayo kunomntu ozinze emhlabeni, ndiza kunika umbono wam malunga nokuzama ukungathathi cala kangangoko, kwaye njengamava endikuwo ngoku Umnini we-iOS kunye ne-Android ngaxeshanye.
Inqaku 1.- «Ukusetyenziswa kweqela lesithathu»
Ndicinga ukuba sonke apha sinoluvo lokwazi ukuba bathetha ntoni, kodwa hayi ukuba bachaze gwenxa, ndenze uphando olukhawulezileyo kugoogle malunga nekota, ndibona into enomdla, bonke balatha kwinkcazo yam; "Zizicelo ezingadibananga ngokungqongqo okanye ezinxulumene nomlamli weqonga ngokwalo" Esebenzisa le ngcinga kwiApple kwiVenkile yeApple yeApple, iiapps ezihlala apha zinesivumelwano neApple efuna ukuba basebenzise imigaqo yabo kwaye iimeko, oku kubenza babe sesekondari.
Kwelinye icala, kwizinto ze-Android zahlukile, akuyomfuneko ukuba ube nengcambu okanye wenze uhlengahlengiso olungaqhelekanga kwisixhobo sakho ukuze ukwazi ukufaka iiapps ngaphandle kweqonga labo lokuthengisa, ungaya kwiphepha lonjiniyela kwaye ukusuka apho fakela iiapps zabo, bekhuphela iifayile ze ".apk" kwisikhangeli ngokwaso kwaye uzifake. Ewe ewe, ngaphandle kokuba uneakhawunti, sayina ikhontrakthi okanye wamkele imigaqo yosetyenziso.
Inqaku 2.- «Guqula imbonakalo yesiphelo»
Wow wow wow, ungangxami kangako, ngaba sithetha ngokutshintsha inkangeleko okanye ukukhulula umatshini? kuba nangayiphi na imeko, ndinayo yomibini le micimbi, kodwa kuba sithetha ngokutshintsha imbonakalo yesiphelo, masiye kuyo kuqala,
Ngaba inokwenziwa kwi-iOS? Umntu othile undixelele ukuba kutheni ndingakwazi (Ukucinga ukuba ndine-iPhone 5 ene-iOS 6.1.3), Ekuphela kwento endinokuyenza kukutshintsha abamhlophe babe ngabantu abamnyama kuso sonke isixhobo ukuze basisebenzise ebusuku (Endingenakukuthatha njenge «tshintsha umba ukuya isiphelo »sokuba ngumsebenzi) Kwelinye icala kwi-android, ndingakuxelela ntoni? KwiVenkile kaGoogle yokuDlala ungafumana ii-launcher ezidumileyo, iiapps ezitshintsha iifonti kunye nezinye izinto ezininzi, eziguqula izinto ezingapheliyo, ngaphandle kwento yokuba kwicandelo elifanayo leseto elivela kumzi-mveliso ungalitshintsha icandelo, Umzekelo masibone, ikhibhodi! (Icandelo elisisiseko lenkqubo yokusebenza, ngakumbi ukuba liyabamba)
Inqaku 3.- «Khupha umatshini»
Ngoku ukuba siza kule ndawo, kodwa impendulo yam iya kuba mfutshane kuba kwimpendulo yakho efanayo ndiyabona ukuba uyavuma ukuba zombini i-iOS kunye ne-Android umba uya apho ikhoyo, zizinto ezahlukeneyo kwaye kuzo zombini iimeko, zisebenzisa Oku kuyimfuneko ukuba ube nolwazi oluncinci lwento eyenziwayo kwisixhobo, kwi-iOS ngamanye amaxesha kulula kwaye ngamanye amaxesha kunzima, konke kuxhomekeke kwimeko kwaye loluphi uguqulelo ofuna ukulusebenzisa, umzekelo ngoku, ndenza umzekelo wokuba ukuba ndinayo i-iPhone 5 yam kwi-iOS 6.1.3 andizukukwazi de ndiphinde ndibone. Kwi-Android, ubunzima bokufezekisa oku buhluka kakhulu, kuxhomekeke kumenzi, kodwa ngesiqhelo kulula kwaye kule ayinamsebenzi ukuba ikweyiphi na inguqulelo, kuba xa inokugxilwa, iyakuhlala njalo nokuba ukufaka inguqulelo entsha, kwaye ngamanye amaxesha ukukhupha izixhobo ezithile unokuzikhuphelela usetyenziso kwiVenkile efanayo kaGoogle Play eyingcambu yayo (Ungayichazanga eyokuba kukho iiapps ezikhuphelela amagumbi aphekiweyo kuwe kwaye uzifake apho ngaphandle kokufuna I-PC phakathi), i-tsssss eziluncedo?, Ingcambu? Jailbreak? Masithethe ngayo ukuba uyathanda kwaye uthanda nini.
Inqaku 4.- «iTunes phakathi kunye… (Ngqamaniso)»
Njengamanqaku amabini angaphambili, sithetha ngokulawula ujongano ukulawula umxholo wesixhobo sam okanye ukungqamanisa, ukuba zombini, ndaya kweyokuqala.
iTunes, eso sicelo siyimfuneko kwi-OSX kwaye esihogweni kwiifestile (Amagqabantshintshi angathathi hlangothi, awam kwaye aphantsi kwamava am) Ukuhambisa iifayile kwisixhobo esitsha ngokupheleleyo, esona sihle kakhulu kwaye sipholile, kufuneka ndibuyele ngaphakathi ixesha njengaxa ndifuna inkqubo yokupasa iithowuni, imidlalo kunye neefoto kwi-sony eokia t226, inyani, ngaba akukho lula ukuvula ifestile yokuhlola ifayile, uye kwindlela apho unemixholo yakho, kwaye uyidlulise kwikhompyuter yakho Yeyiphi imemori ye-USB? Ewe, xa usebenzisa i-iTunes njengophakathi, uninzi luya kuyikhetha le ngenxa yezizathu zobuqu, abanye abayi kuyenza. Kodwa ikhonkco lokuyisebenzisa kwaye apho ndiye ndachaphazeleka amaxesha angenakubalwa, kukuba kufuneka NDIGCINE umculo wam, imifanekiso, iiapps, iividiyo, ipodcast, iincwadi, njl. kwikhompyuter yam ukuba ndifuna ukuzigcina ndinazo kwisixhobo sam, okanye ubuncinci kufuneka ndizibeke kwilayibrari yam ukuze ndikwazi ukuzidlulisa kwaye ndizicime kufuneka ndenze yonke i-odyssey, ndiyazi ukuba kukho ukhetho ebizwa "ngokulungelelanisa umxholo ngesandla" kwi-iTunes efanayo, kodwa siyaqhubeka ngokufanayo, KUFUNEKA Sisebenzise i-ITUNES.
I-Android, ubomi bulula, ngaphandle kweengxaki, uqhagamshela isixhobo sakho nakweyiphi na ikhompyuter kwaye ayinasithintelo kunye nesithintelo sokukwazi ukubeka nantoni na endiyifunayo kwikhompyuter endiyifunayo (Elinye inqaku elibi leTunes, unga kwi-iOS ?), isixhobo sakho sifana nefolda enye kwikhompyuter yakho kunye ne-voila.
Iinkqubo zomntu wesithathu ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes? Masibone, ngaba ngenene ndiyayidinga? Ndiyathetha, ukwenza oku, kwaye njengomzekelo wento endisandul 'ukuyithetha, kuya kufuneka ndiyiphathe iToTool kuyo yonke indawo kwi-USB ukuze ndibeke nawuphi na umxholo kuyo nayiphi na i-pc, ngaba kunyanzelekile ukuba uyenze nje kuba iApple inyanzela ukuba usebenzise i-iTunes yakho? hayi, ewe ...
Ungqamaniso, nazi izinto ezininzi ozikhethayo, abanye bonwabile ngeICloud, abanye ngeGoogle Drayivu, kodwa mandikucaphule; «Unokuzikhuphelela usetyenziso ngaphandle kwe-iTunes, ungenza iikopi zokulondoloza kwaye uzilayishe kwi-iCloud, unokukhuphela umxholo we-multimedia (iividiyo, umculo, iimuvi ...), enkosi kwi-iCloud sinokudibanisa amaxwebhu phakathi kwezixhobo zethu kunye nekhompyuter yethu. »Ndisebenzisa iinkqubo zomntu wesithathu ukuba ndingasebenzisi i-iTunes esele ndiyichazile kuwe, ndenza iikopi ezikhuselayo, oku kuxhasa i-android, kwinyani elula yokuba akukho mfuneko yokuba ndenze i-backup, yenziwa kwangoko ukuba Ndiyisebenzisa, ndatshintsha ukusuka kwi-LG Optimus ndaya kwi-Nexus 4, kwaye kwanele ukuba ndingene ngegoogle xa ndivula i-Android yam okokuqala ukuqonda ukuba ndinayo yonke into kwaye ndinayo ngaphambili Isiphelo, abafowunelwa, iiapps, iifoto, useto lweapps, iiwijethi, izaziso, njl. Into malunga nokukhuphela umxholo, njengeevidiyo, umculo, iimuvi ... Ucinga ntoni? Kwi-Android unako, kwaye ngaphandle kokungena ngebhokisi njenge-iTunes okanye i-iCloud, yiza, nokuba ukwisikhangeli esinye onakho. Kwaye ukuba uthetha nge-iCloud njengevenkile yokugcina umxholo, masithi uGoogle Drayivu uhamba inyathelo elinye phambili, kumaxwebhu endinokuwahlela uxwebhu ngexesha lokwenyani ngelixa libonakala kwikhompyuter yam. Kwaye into yokugqibela oyithethayo malunga "Singakwazi nokuhlaziya kuhlobo lwamva nje olufumanekayo okanye sibuyisele isixhobo sethu kwimeko yomzi-mveliso kwaye sibuyisele ukhuphelo, nayo yonke into, yonke into ngaphandle kokudibanisa i-iPhone yethu okanye i-iPad kwikhompyuter ukuze isebenzise i-iTunes." Ndiyabona ukuba nguwe oshiye ukutsho oko kukubonisa ukuba i-iOS khange isetyenziswe kangangeminyaka, uxolo! I-Android, yonke into enokwenziwa nangaphezulu ukusuka ngaphambili kwi-android, ndicinga ukuba kwi-iOS ungaqala kwi-iOS5 okanye into enjalo, akunjalo? Andikhumbuli kakuhle, kwi-Android okoko yaqalwa.
Khomba 5.- "iBluetooth kunye neendlela zokudlulisa iifayile phakathi kwetheminali"
Uyivumile kwaye ilungile, ibluetooth ye-iOS yenziwe, kodwa kuyafuneka ukuba ube neJailbreak (endingenakukwazi ukuyisebenzisa kwi-iPhone 5 yam nge-iOS 6.1.3) ukuze ndikwazi ukuyisebenzisa, ah, kwaye apho unokuyenza kuba Ngaba unethamsanqa lokuba neyakho ngeJailbreak (Ewe, ithamsanqa liyafuneka kwizinto ezininzi) Ngaba kufanelekile ukufumana iingoma ezivela kwiNokia, ukufumana iividiyo kunye neToni?
Ewe, ukuba uhambisa iifayile phakathi kwezixhobo ezineeapps eziphakathi ezinje ngezi uzikhankanyileyo, zilunge kakhulu kwezoapps, kuba iApple ayenzi msebenzi wayo kwaye njengesiqhelo, kufuneka ixhomekeke kubantu besithathu kuloo nto, kodwa ndiyakukhumbuza, nangona Unako kwi-iOS, i-Android iyaqhubeka ukuphumelela ngokudilika komhlaba, kuba nkqu neeapps zinokugqithiswa, iziqalisi, amaphephadonga aphilayo okanye ingakanani intsangu abayifunayo (Ngaphandle kokukhankanya ukuba iiapps zinokuhlala kunye kwaye zigqithise iifayile phakathi kwazo nokuzisebenzisa ngentando)
Ewe, ndicinga ukuba kulapho impendulo yam ifika khona, ndidiniwe okokoko kuba eMexico ndivuka kwakusasa kwaye kufuneka ndilale, ndiyathemba ukuba izimvo zam zipapashiwe kwaye zithathelwa ingqalelo njengoko benditshilo Ukuqala, kwaye awuyiyo Uzama ukweyisela nabani na, i-iOS kunye ne-Android kufanele ukuba bazithethele, kwaye apha baya kubona izimvo ezilungileyo nezingalunganga, uninzi lwabakhuseli naboni, yonke into ihlala iyimfihlo kwaye ukhuphiswano luyasebenza ukuqaqambisa ukomelela phakathi kwenkqubo nganye, kwabo banolwazi olungelulo, zazise.
Impendulo enkulu kumhlobo, izinto ezisisiseko azinakwenzeka.
Ngokuqinisekileyo abathethi NGOKUSEBENZA IOS ekuthelekiseni ne-ANDROID, eh? Ezo zinto zisindisiwe. Uya kuba neentloni zokuthi i-iPhone5 enee-cores ezi-2 + ze-IOS zihamba ngokukhawuleza xa zisebenzisa i-Xperia Z + Android 4.1, akunjalo? Ukuba kwiBenmarkmark i-iPhone5 ikhuphe i-1700 (ii-2 cores) kunye ne-XperiaZ 1900 (ii-4 cores). Madoda e-android ndiza kukuxelela into ibenye kuphela .. Ukungabinamsebenzi kweBluetooth yethu kuyinyani njengokuba i-Android NGEKE ikhawuleze kune-IOS. I-Android iya kuhlala iyinkqubo yokusebenza ekrwada, ecothayo, engasebenzi kakuhle kwaye ekufuneka ubeke kuyo iidosi ezinkulu ze-RAM, i-MHz ngokulula ukuhamba ngesiqhelo. Yintoni entle ngakumbi? Ivawutsha. Kodwa oko kusonjululwa xa sisenza iJeleBreak kwaye senze nge-iPhone yethu into ephuma "phaya" ngokusisiseko. Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni xa bekhupha i-IOS7 kulo nyaka, iya kuba lixesha lokuvala imilomo kuyilo. Njengoko benditshilo njalo, i-iPhone-IOS ayenzelwanga wonke umntu. Andikaboni bancinci naye. Wonke umntu une-Android kuba UMGANGATHO UHLAWULWA.
Eyona nto indikhathaza kakhulu kukuba ama-fanboys anje ngokuthuka i-Android xa le webhusayithi yeyokufunda nokunikezela ngezimvo, ngaba uthi i-iOS kunye ne-iDevice zikumgangatho? nkqu nabavelisi baseTshayina be-android ... bayalingana kumgangatho kwaye zitshiphu kakhulu, iapile iyathemba ukuba yinkampani eyaziwayo kwaye yiyo loo nto besenza oko nayo iOS iyasebenza ???? Kuthekani ngesiphene esivela kuhlobo lokuqala lwe-iOS oluvumela ukuba uzenze ngathi ungomnye umntu kwiSMS? Inkqubo yokusebenza, inomdla, kulula ukuyisebenzisa ... Ayisebenzi kakuhle ... ukungabikho koyilo endikuthandabuzayo ukuba kwi-iOS 7 yinto enkulu, undixelele nokuba iApple inkulu kakhulu kuba bayikhuphile iMini Mini, kwaye yintoni uyeza ... i-iPhone ngexabiso eliphantsi, i-Phablet ... i-apile ishiye ngasemva kwaye bayazihlaza kuba ukukhupha ezo zixhobo bekungasekho engqondweni xa yayiyi-apile enkulu «
Ndicaphula ngokutshintsha amagama amabini, ukuze ubone ukuba uthetha wedwa «eyona nto indikhathaza kakhulu kukuba iifandroid ezinje uza kunyelisa i-iOS xa le webhusayithi iza kufunda kwaye ivakalise ...»
Ungayibona idasta yakho!
Ngokwenene, awuzukundibona ndithuka i-Android, andinasidingo, ndithenga into endiyifunayo kuba ndifuna, kwaye akukho mfuneko yokuba ndikholwe mntu ngayo nantoni na, andiqondi ukuba abanye benu baziva benyanzelekile sifundise okuthile…
Andizami kufundisa nantoni na kuye nabani na, ndinika olwam uluvo kuba ukuba i-iOS yakho igqibelele ... kutheni igcwele iincukuthu neempazamo? ngokomgangatho, i-4S € 500? I-pfff endiyithengayo i-2 ye-android yamandla angcono, andinguye »fandroid» kuphela ukuba ukhusela zombini i-iOS xa sifuna ukwenza ingxoxo-mpikiswano efanelekileyo kunye noluvo, siya kuyikhusela i-android, kwaye senditshilo ukuba ndisebenzisa i-iOS ukusukela ngo-3.1.3 .6.1 ukuya kuthi ga ku-XNUMX kwaye yayifana nesiqhelo kodwa, kunjalo! yiapile! yonke into ingcono xa besenza!
Hehehehe iOS igcwele bugs ?? Uqinisekile ngento oyithethayo okanye oyithethayo ngokungazi, indawo apho bathetha khona abantu abangafundanga.
YONKE inkqubo yokusebenza ineeBugs, BONKE. Akukho 100% yenkqubo yokusebenza engenaziphene ...
Ukuqala koku, kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba yeyiphi eyona nkqubo inezona bugs zinkulu ...
Khangela malunga nebug kwi-S3, enokucima umxholo wayo ukude ... umzekelo ...
... okanye "umngxunya" kwibhetri, abazama nzima ukuyilungisa kwiirom eziphekiweyo ...
UJose Andrade sitsho
Umngxunya webhetri? Ngaba uqhelene nohlaziyo lwe-3 lwe-iOS ukuzama ukuyilungisa? : 3 haha, yonke inkqubo yokusebenza ineebugs zayo, kodwa ii-iOS zona ziyamangalisa
3 uhlaziyo ukuyilungisa? Phi ?? Nini?? Hahahaha ibhetri ye-iPhone5 yam ihlale ngokuchanekileyo ngokufanayo ku-6.0.1 naku-6.1.2 ke uyeke ukuzikhohlisa uzithengele i-LG abathi ihlala iintsuku ezi-4 xD!
Umfana othandekayo sitsho
Kulungile nge-500 € uthenga ii-androids ezimbini zamandla angcono kuya kufuneka uyibone hahahahaha! Ndiyakukhumbuza ukuba i-S2 ixabisa i- € 3 kwaye ingena ngaphakathi kwi-iPhone400 kwisantya se-xD! Ke ungcono ugcine kwaye uthenge i-S5 nangona ndikuxwayisa ukuba i-iPhone elandelayo iza kukunika iinwele zakho.
UFanBoy? Hahahahahaha kunokuba yinyani! okanye kukuba into endiyithethileyo ibubuxoki? Ukuba bendiyi-fanboy (onayo nge-android) ngekhe ndivume ukuba lilize kwebluetooth ye-iOS, awucingi? Ukuba ufuna iinyani, yiya ku-Youtube kwaye ubukele zonke iividiyo ezithelekisa ii-terminals kwaye uya kushiya amathandabuzo. Ndikwi-Android iminyaka emininzi kwaye isantya kunye nokusebenza kakuhle endikunikwa yi-iOS akuzange kunikelwe yi-Android. Kuyinyani ukuba umba wokhuseleko unokuphuculwa kodwa akukho OS ifezekileyo. Bonke baneentsilelo zabo. Kwaye ayithethwanga kwaphela into yokuba i-IOS kunye ne-iPhone ifana nePenis kunye neNdoda (Yonke ivela ekhaya) ayithandi i-Android ukuba kukho iinguqulelo ezininzi kwaye kuya kufuneka uzilungelelanise nezixhobo ezifanelekileyo. Yonke into ine-PROS yayo kunye ne-CONS kodwa namhlanje i-IOS yeyona nkqubo ikhawulezayo yokusebenza emhlabeni kwaye akukho mathandabuzo ukuba iya kuphucula.
Ndiyacela! Andikholelwa ukuba uthelekisa i-Xperia Z ne-iPhone 5. Ukuqala, ndiqinisekile ukuba kuninzi lweebhentshi i-Xperia iphuma njengophumeleleyo, kodwa… kutheni uphawula! Kwaye ukuba uyandichaza ukuba i-iPhone iyenzeka ngentando yakho ngeJailbreak, kulapho ke kuya kufuneka sithenge i-iPhone eyaphukileyo nxamnye ne-Android eneJelly Bean (ukuba awuyiqondanga, i-android ayifuni kuguqula isoftware ukuze ibe yeyakho)
I-PS: ngoku ngokungathandekiyo, ndandingumntu othanda iapile iminyaka emininzi, kodwa xa iApple yakhupha i-iPhone 5 yayisele iyicacisile into yokuba indima yayo kwihlabathi lobuchwepheshe kufuneka itshintshe okanye iphele. Ke ngoku ndinayo i-S3 kwaye inyani kukuba ndonwabe kakhulu kunakuqala bendine-iPhone
efanayo Ndithi! Bendi fanboy ukusuka kwi-firmware 3 ukuya ku-6.1 kodwa inyani kukuba i-iPhone 5 iyadanisa… kwenzeka ntoni kulwakhiwo luka-Apple? Khuphela isikrini esizi-intshi ezi-4 ukuzama ukubamba isamsung? utshintshe ubume besiphelo sendlela? kwaye malunga nesoftware kunye ne-iOS 6 akufuneki ibizwe ngokuba yi-6 njengoko iBigBoss ithe kufanelekile ukuba ibizwa ngokuba yi-5.2 okanye i-5.1.2
Kunjalo ngeSamsung ngoku ukusuka kwi-S3 ukuya kwi-S4 ekwandiseni isikrini! Zonke ezinye ziyafana .. awuthethi ngaloo nto
Ukuba kuyinyani ukuba i-Samsung iyandisile ikhusi, kodwa kuba ilandela indlela yayo yorhwebo. Kodwa iapile ikhuphe i-4-intshi ye-iPhone kuphela kuba ukuhla kwentengiso kwakusele kugqithisile.
Sele ndiyazi ukuba andingomphuhlisi obalaseleyo kwaye andizenzi.
Ndiyazi ngamava ukuba i-Android ibhetyebhetye kakhulu kodwa ulawulo lwayo, nokuba uyikhusela kangakanani, iseyiminyaka elula kude ne-iOS. Kuya kufuneka ukhumbule imiba ethile enje ngeebhalbhu ezisebenzisa iithebhu kunye nokujongwa kwewebhu kwaye ngenxa yoko amakhulu okusilela kwaye andibhekiseli kusilelo lomphathi we-novice kodwa neengcali kwaye ukuba uyinkqubo ye-Android uyakube uyinyamezele kwaye uya kuqhubeka usokola.
Kwi-iOS ubotshwe ngandlela ithile kodwa ikwaguqukayo kwaye ibalaseleyo kuko konke, uyilo loyilo lusebenza ngokugqibeleleyo, nantoni na oyisebenzisayo, yonke into isebenza kakuhle.
Ukuhlengahlengisa usetyenziso kwizikrini kuyinto eqhelekileyo ukuba kufuneka balungelelanise nangona bahlala besebenza kwimowudi yokuhambelana. Ewe ayenzeki kwi-Android kuba yonke into inye kwaye ukuba ufuna ukwenza uyilo olwahlukileyo lwezikrini ezahlukeneyo okanye izixhobo kuya kufuneka ukwenze oko nge-pedal, engenzeki kwi-ios okoko unokuyila izikrini kwi indlela enobuchule kunye ne-agile ngakumbi.
kwaye ndihlala ndikuxelela ukuba andiyiyo ingcali ndizithatha njenge-novice kodwa iyanceda kakhulu ukwenza inkqubo ye-ios kune-android kwaye ndiyakholelwa ukuba uninzi lwabantu abathi yingcali ye-Android bubuxoki kwaye Amateurs anezicelo ezikwi-Android kuba isimahla kwaye izama nantoni na ehamba kuba ingahambi nakweyiphi na icebo lokucoca ulwelo.
Inkqubo yenkqubo ye-Android kunye nokuyilayisha kwivenkile yokudlala kufuna intlawulo enye yee-Euro ezingama-25, simahla into ekuthiwa simahla ayisiyiyo. Enye into enje ngeVenkile yokudlala ... zeziphi iziphithiphithi! jonga nje enye okanye enye ithengise ... ivenkile yokudlala yintlekele.
Phendula kwi xopen
Ndivumelana kakhulu nento oyithethayo. Kodwa ngaphandle kwento yokuba mva nje ndizicacisile nge iTunes, bendisebenzisa i-iPhone ukusukela ngo-2008 kwaye akukho nkqubo ibimbi kune-iTunes. Kwakunzima kum ukufumanisa malunga nolawulo lwethala leencwadi, ukungqamanisa nesixhobo somxholo kunye nokunye ukusebenza kwenkqubo. Kwaye ndiyazi ukuba ayindim ndedwa.
Ukuba siphucule, ewe: njengoko usitsho ngoku asiyidingi i-iTunes phantse nantoni na
I-Sinde ikushiye ii-neurons eziqhotsiweyo: «'Kwaye ndiyibeka njani imovie endiyikhupheleyo kwi-intanethi ngaphandle kwe-iTunes?' Asithethi ngokuqhekeza, ubuncinci ndim. "
Mhlawumbi yingxaki yakho leyo, uyambona umntu oyingcali kwaye sele umbiza ngokuba ungumlandeli ngoba awuyithandi into ayithethayo. Ndifundiswe njengomntwana ukufunda / ukumamela abo baziyo.
Njengoko besenditshilo ngaphambili, ndikwangumbhali wenkqubo, bendisebenzisa i-Android kangangeminyaka engama-3-4 kwaye akukho mntu undinyanzele ukuba ndithenge i-iPhone 5 (ndiyenzile ngala mini yaphuma ngayo kuba andinguye umlandeli kwaye ndiyazama ndedwa), kwaye ngoku nditsho ndiziva ngathi "ndithintelwe." Kodwa ke, njengokuba ndingumdwelisi wenkqubo, sele ndiyenza kwaye ndifuna ukuyinyelisa i-iPhone, ndiyichithe ngokupheleleyo i- € 670 nje ukugxeka.
I-PS: I-Atarrabi iyandonwabisa ukubona abantu abathetha ngamava phakathi kwabaninzi abathandanayo.
mmm jonga uthelekiso lwazo zombini lukhulu kakhulu, bendine-3gs ye-iphone emva koko ii-4s kwaye ndingazibamba ngeJailbreak kuba bendiwuqonda kakuhle lo mbandela, kodwa ndadikwa yinkqubo yabo engathandekiyo nenqongopheleyo, ndisebenzisa le itunes kakhulu ukubeka ingoma yoyikeka.no bendinokumamela unomathotholo okanye ndithumele umfanekiso, into esisiseko namhlanje. Ngaphandle kweJailbreak bendisikelwe umda, kuba ayizizo zonke ii-cydia steaks ezisebenza kakuhle. Ukusuka kuninzi ndathenga i-galaxy s2, etshintshe inkqubo yasimahla, ngaphandle kwamaqhina kwaye iikhonsepthi ze-Android zingcono kunee-ios kum ziyinyani ngokupheleleyo, kwaye bathi i-Android locks kunye ne-ios ayiyiyo, leyo yintsomi kuba i-galaxy s2 yam ayitshixanga i-almoenos ukuba le app ayixhaswanga (eyenzeka nje kwi-ios kum) akukho nto ivela kwelinye ilizwe.
UJuan Camilo Moreno Alzate sitsho
Enkosi ngokucaca kwazo zonke iikhonsepthi kwaye uthatha kancinci ukuba zininzi izinto ezithethwayo malunga ne-iOS ezingeyonyani ………. Into endiyithandayo yi-iOS. !!!!!
Phendula kuJuan Camilo Moreno Alzate
Andizange ndifune ukuthetha ukuba kuyingozi okanye kunzima kwiJailbreak iOS, into endiyithethileyo kukuba ukutshintsha ukubonakala kwe-Android akuyimfuneko ukwenza nayiphi na le nkqubo, ukukhuphela nje iLauncher kwanele.
Andikaze ndithelekise ingcambu ngeJailbreak kwaye wonke umxholo wenqaku lam ujolise kwiitheminali ngaphandle kwengcambu okanye iJailbreak, uthelekiso olulula ngokuthe ngqo.
Ngokubhekisele kwinto yeBluetooth, andicingi ukuba ndiyibaxile nantoni na endiyithethileyo.
Ngapha koko, kwaye kwinto ekufuneka siyenzile, ndicinga ukuba umntu ngamnye uya kuzikhusela eyakhe, nangona ndingakucela ukuba udibanise into encinci nesiphelo esifanelekileyo nge-Android kwaye emva koko ubeke izimvo kwimbonakalo yakho.
Ndingumntu okanye ndingumsebenzisi wazo zombini iinkqubo, bendine-iPhone 4, kwaye inyani bendiyithanda yonke into, kuba ibenza ubomi bam bube lula, ndisebenzisa umnxeba kwishishini, ndilawula iiakhawunti ezi-5 ezahlukeneyo ze-imeyile, inkxaso ekude njl. kakuhle ndingayenza yonke loo nto.ukuyenza nge-iPhone yam ngaphandle kokuvula ithanga lam, ukuba mandithini, i-iPhone ilungile ngokwenene, ndiyayithanda ngendlela endiyithandayo, i-Tweaks nge-cydia, yazi iiTweaks ezintsha kunye nohlaziyo ngezi ndlela ezinje nge-Feeds, ndingene kuyo, bendifuna ukungena kuyo. Kangangokuba ndifuna ukwenza iApp ye-iOS kwaye ndiyilungelelanise nemfuno yam emva koko ndikwazi ukuyithengisa kwiVenkile yeApple, kodwa umda, Kuya kufuneka ubenayo i-MAC yokwenza iinkqubo ze-iPhone, ndizamile i-VMWare ngeHackintosh kwindawo eyiyo kodwa andazi ukuba kutheni ndingaze ndiqale inkqubo hehe, eyona nto ibiyinto yokuba leyo yayingumda kum, kodwa mna khange uyidinge kakhulu okoko i-iOS, i-tweaks kunye ne-Apps zomntu wesithathu zikuvumela ukuba usebenze ngokulula kwi-iPhone yakho, andisakhumbuli ukuba ndisebenzise ixesha elingakanani, ndicinga malunga neminyaka emi-2 okanye unyaka onesiqingatha , kodwa ndiyayiqhela kakhulu.
Kule nto ndiya kuyo, nditsho nokuba nesiphelo esiphakamileyo, ndibone ukuba ukhuphiswano belusibekela njani, kwaye kude kube lusuku olunye ndicinga ukuba, kuya kufuneka uzame i-Android, kwaye kunjalo apha iza kukwazi ukuthelekisa i I-iPhone ye-iOS ene-Android, kwaye sisiphelo esisikhethayo, njengoko sasine-iPhone 4 yesiphelo esiphakamileyo, kwakusengqiqweni ukuba ukuze utshintshe okanye uzame enye itheminali kwenye inkqubo, kwakufuneka ibe kuloo nto, kwaye njengokuba umntu uyaliqonda, kuqala ixabiso, emva koko inani leziNgcebiso okanye uthelekiso kwi-intanethi, yindlela endizibeka ngayo, ndala iSamsun Galaxy SIII, kwaye mandithini, ekuqaleni ukufuduka kwakunzima kuba ndingazi nantoni na malunga ne-Android okanye indlela yokujikeleza, kuba ukufika kwe-imeyile, kuye kwafuneka ndiyiphendule nge-iPhone yam, kodwa izinto zitshintshile xa kancinci kancinci ndizibona izibonelelo zomnxeba kunye nenkqubo yayo ye-Android, kwaye apha wonke umntu unezinto azithandayo , Ndathi ndakufumanisa ifowuni kunye nenkqubo yayo, ndabona i-iPhone yam kunye ne-ps ndamxelela ukuba lixesha lokuba ndimke U-Hehe, ekugqibeleni, ndiye ndaqonda ukuba le fowuni (andazi ukuba zonke iifowuni eziphezulu ze-Android inayo) sele inemisebenzi eyakhelweyo ngaphakathi okanye izixhobo zefektri ezenziwa nguJailbreack kunye neeTweaks ezininzi kwi-iPhone. ukwazi ukusebenza ngokulula.
Into endiyithandayo nge-Android yingqondo yeqela labaphuhlisi apho ingaxhomekekanga kwinto enye, kodwa ikhowudi yasimahla kwaye umntu angenza nantoni na ngenkqubo, kwaye ke oko kukhokelela ekubeni ube neeROM ezingazinzanga, kunye nezinye iincukuthu, kodwa ayisiyongxaki leyo kum, kuba ndingazama ukutshintsha iROM, kwaye idatha yam, iiapps kunye nezinye, ziyazibuyisa, ndiyayithanda le nkqubo, kwelinye icala, kwi-iPhone xa kufuneka ndibuyisele, kuye kwafuneka ndiqale ukusuka ekuqaleni, Buyisela, iJailbreak, yongeza indawo yokuphumla, jonga iiTweaks ozifakileyo okanye kakuhle ukuba wenze ukhuphelo lwee-repos kunye neeTweaks ngeApp efanayo ne-Cydia kwakulula kodwa ke kwafuneka uhambe ngeCydia kunye neJailbreak ukuze ukwazi ukubuyela kwisimo sakho sangaphambili (unokuvula iSSH ngesiphelo esivela kwiPC, kodwa kusafuneka ufake ii-tweaks nganye nganye).
Ekugqibeleni inyani kwabo bayifundayo le, incasa yeyakho nganye kodwa olu hlobo lwamagqabantshintshi lulungile kuba nam ndizisekela kakhulu ekuthengeni i-iPhone, kwaye ngendlela efanayo ndizibeka kumaphepha amaninzi ukuthenga I-Android, ngolu hlobo ndizamile zombini kwaye andiphikisani nenye ye-2, kuphela kokuba ndiphawule ngamava wazo zombini iinkqubo, kwaye ndigqibezela ukuba zonke izihlobo zam zine-iPhone, ukusuka kwi-iPhone 3gs ukuya kwi-5 kunye ne-iPad mini, kodwa xa ndathenga i-Galaxy SIII yam, inyani kukuba bashiyeka isiqingatha njengoko babebona indlela i-iPhone esele inalo ngayo ukhuphiswano kwaye ukuba ayikhawulezisi ukuyilungisa ngokuqinisekileyo iya kuyidlula, ndiyazi nge-iOS 7 kuba njengoko ndisitsho, Ndisebenza kuloo nto, ukufaka iJailbreak kunye nee-tweaks kwii-iPhones ezikufutshane neDolophu yethu enkulu njengoko besitsho, kwaye nantsi iBluetooth iyimfuneko, kwaye kwesi sihloko sele begqabaza ngayo, ukuphela, wonke umntu unomdla, kunye nezizathu kutheni kuye kwafuneka ndithengise i-iPhone 4 yam xa bendinomthala, khange ndiyisebenzise kwaye nayo Imisebenzi yefowuni yeGPS SIII, ndiyithandile indlela yokuthatha iifoto xa iVidiyo irekhodwa, nqumama, ubenakho ukurekhoda iifowuni (ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukuyisebenzisa kuvavanyo (kwi-iPhone ndakhangela i-tweak okanye i-app, kodwa khange Fumana enye okanye ibikhona kodwa bekufuneka uhlawule ngomnxeba), Dlala iiVidiyo kwiwindows pop-up kuyo yonke ifowuni, ukuze ubone i-imeyile okanye omnye umsebenzi kwaye kuya kuhlala kukho iwindow encinci yevidiyo yakho Ukudlala kwakhona, kuluncedo olukhulu kum xa ndifuna ukwenza omnye umsebenzi ngaphandle kokulahleka kwividiyo, kunye nenketho entsha ye-Multi-Window (ehambelana kuphela nee -apps ezidibanise lo msebenzi) oku kusebenza, umzekelo, ukwahlula isikrini 2 zokusebenza ngaxeshanye, isiqingatha sesikrini se-Facebook kunye nezinye ukwenza ii-imeyile, zombini ngaxeshanye vula, ndingatsho kancinci kodwa ezo ziluncedo endizifumeneyo, kuya kuhlala kukho ukungalunganga phakathi kwezi zimbini kodwa kumava am ayimfuneko. Njengoko i-Android ivulekile kwaye nabani na angakwazi ukwenza inkqubo (oku kukhokelela ekwenziweni kweeapps ezingeyomfuneko, kwaye zikwiivenkile zonke), ndakwazi ukwenza iapps kwiimfuno zam kwaye ndinokwazi ukuyithengisa xa umntu othile ebakhonza kuyo Ivenkile yePla.
Ukuba umntu ufuna ukuthenga i-iPhone, ndincoma i-iPhone 4, kuba ii-4s kunye ne-5 azikho zintsha kakhulu kwaye akufanelekanga ukutyala imali eninzi ngeedola phantse akukho nto intsha, okanye ulinde i-iPhone 5s kwaye ke ubone ukuba zizisa ntoni iindaba, ukwenza ukuba kulungele ukutyalomali, uninzi lwezihlobo zam zaphoxeka nge-iPhone 5 yazo, kuba ilingana no-4 othetha ngokusebenza, ukuze bathenge i-iPhone 4 okanye balinde i-iPhone 5s ukuba amarhe aya kuyinika NgoJulayi okanye ngo-Agasti kodwa ndicinga ukuba iyakuphuma kude kube nguNovemba okanye ngoDisemba ezivenkileni.
Ukuba ufuna ukuthenga ifowuni ye-Android, ndincoma isiphelo esiphezulu ukuze kamva ungatsho ukuba uswele oku okanye oko, iimveliso ... i-HTC One, i-Nexus okanye i-Galaxy S4.
Nabani na oqonda kancinci malunga ne-objetive-c kunye ne-Android (iJava kwisintaksi) oye wafaka izicelo ezifanayo ze-Android kunye ne-iOS enenqanaba lokuthetha ngamaqonga aya kukuxelela ngaphandle kwamathandabuzo ukuba i-iOS iyonwabisa, yinto kuyonwabisa ukwenza usetyenziso nakwi-android ... into ongayithetha ungayenza yonke into kakuhle kodwa iindleko, kubiza kakhulu ukuba yonke into ijonge phantsi kwi-Android. Kum eyona nto inomtsalane ngayo yonke le nto kukuba xa uchukumisa isikrini se-iPhone ngomnwe wakho, yonke into iyema ngaphakathi kwi-iOS isithi EH! endichukumisileyo! umnwe wakho ngalo mzuzu liziko lendalo iphela kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu kwinkqubo yokusebenza, kwi-Android engenzekiyo xa uyichukumisa kufuneka ihambe indlela ende (yiyo loo nto paroncito ngamanye amaxesha) ide yenze i-EH efanayo! ukuba bandichukumisile!, kwaye ayinakulungiswa, ngokubhala nje inkqubo yokusebenza kwe-Android kwakhona.
Ungayichazanga i-Samsung kunye ne-mania yayo ngokuchukumisa i-kernel ye-Android….
Ndinawe. Oku kuko okwenza ukuba enye inkqubo yokusebenza ibe ngcono kunenye.
Ndandinazo zombini ios kunye ne-android, kodwa ngoku ukuba uyayiqonda, iphone 5 ii-cores ezimbini, i-s3, i-s4, z, enye ... ii-cores ezi-4, amava emidlalo ngokucacileyo ayilayisha le midlalo ngaphambili, i-iphone sisizathu sokuba ndiyilayishe ngaphambili, ubumdaka obunikwa yi-iphone 5 kwimidlalo ngoku buyabonwa ngeefowuni ze-android zohlobo z, enye, s4, ikhamera yekhamera ebhetele ngakumbi ye-iphone5 onokuyikhangela nakweliphi na icala ekuphakameni kwenye, z, nokuba I-s4 imbi kakhulu kuhlalutyo,
Ukuthembeka kwenkqubo, ngokucacileyo ithembekile kwaye ios isilela ngaphantsi kwe-android .. (sele ikho iesos ios awukwazi ukwenza phantse nantoni na okanye iiwijethi okanye ubeke ixesha kwidesktop okanye nantoni na) kunjalo, kodwa ezo zizimele kwinkqubo nganye Kwaye into endiyivumelayo okanye engayenziyo, kufanelekile ukubeka iwijethi eziliwaka kwidesktop, ukuba xa usenza into icothisa ngenxa yeewijethi eziliwaka.
I-RMA ingakhankanyi ukuba eyona nto intle yiapile kodwa umahluko ndicinga ukuba akukho kuthandabuza.
Kwaye kufuneka ubone ukuba akukho nkqubo ifezekileyo kodwa manene, inkqubo evaliweyo IYAHLALE UKUZUZA INZUZO NGOKUSEBENZA, NGOKUHLALELE KUNYE NAKUBA BAHLAWULA.
NGENYE indlela…. NGENXA YOKWENZA NGOKUFANELEKILEYO, IPHONE5 INE-2 KORES NE-ANDROID 4 KANYE NOKULAHLEKA I-ANDROID AMAXESHA AMANINZI, AMANDLA AMANDLA (INUCLEOS, GHZ RAM) NGAPHANDLE KOLAWULO (INKQUBO YOKUSEBENZA KAKUHLE) AKASETYENZISI NANTSI INTO.
Ndisasebenzisa ios kwakhona ndine-iphone 5 kwaye sonke kufuneka sithethe inyani isemva kwaye phakathi kwe-iphone ne-iphone akukho mehluko mkhulu.
UCarlos Trejo sitsho
Sihlobo, sukuba ngunomatse kwaye sele woyisile ukuba i-Android ivuleke ngakumbi kune-iOS, iimpikiswano zakho azinabunyani buninzi kwaye usekwe kwizinto ezingenziwanga ngumsebenzisi wonke, umzekelo, ayizizo zonke izixhobo ezineJailbreak kwi-iOS 6.1.3. , kwaye ezo banazo ziyafundwa, andicingi ukuba wonke umntu uyazi ukuba angazenza njani ezi nkqubo kwaye ke nokubuyiselwa kuyadinisa, ndiyitsho kuba ndiyenzile amaxesha angamakhulu; Kwi-Android awudingi zingcambu ukwenza izinto ezininzi ongazenziyo kwi-iOS.
Ngokunyaniseka, andizukubuyela kwi-iPhone kuba nge-Nexus 4 yam ndonelisekile (ndijonge phambili kwi-5), kwezi ngezihloko ze-iOS ipod touch indanele.
Phendula CArlos trejo
Ngendlela, abo bathetha nge-iPhone 5 yabo ngee-cores ezimbini kwaye babeke i-Android njengerhamncwa kwi-Hardware, funda kancinci malunga ne-GPU kunye noyilo ukuze bangathethi ngokuthetha, nto leyo edida abasebenzisi abangadibananga kakhulu kwimixholo. yolu hlobo.
Zininzi izidlo !!! Mhlawumbi bafumana into ngokukholisa omnye ukuba le nto uyisebenzisayo ibhetele kunayo nayiphi na enye into ... Kuphela ngabasebenzisi be-BB10 kunye ne-WP8 abalahlekileyo, kwaye le setyisi igqityiwe kukugcwala kokugcwala!
Ge IGeek encinci ☭☢ sitsho
Ukuba ufuna ukuhambisa izinto ungasebenzisa usetyenziso lweefayile ezininzi kwilifu njengeBhokisi, iDropbox okanye usebenzise iBump, uqhekeza ii-iPhones kunye kwaye yiyo loo nto. ^ 3 ^
Phendula ☣ kwiGeek encinci ☭☢
Ukuhambisa iifayile phakathi kweedivayisi ze-iOS ungasebenzisa kwakhona iinkonzo ezinjengeDropbox okanye iBhokisi, okanye kwakhona ngeBump, ukuphazamisa izixhobo.
Ngokunyaniseka, njengomnini owonwabileyo we-Iphone 5 kunye neNqaku 2 kufuneka nditsho ukuba i-Ios ngelishwa isalele ngasemva.
Kude kube kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, umahluko omkhulu wokuchaphazeleka kwayo nayiphi na i-iPhone eneziphelo eziphezulu ze-android kunye nevenkile yesicelo ephezulu kakhulu kumgangatho kunye nobungakanani obufana ne-appstore yenza i-bland / ujongano olulula kunye nokusikelwa umda kwe-IOS ifanelwe yintlungu. Ndinayo yonke iphone kwaye njengoko ndithanda ukuzama ukutshintsha kwaye bendihlala ndiphela ngokubuya. I-Android yayingenalo kuluvo lwam kwaye izakundixelela into yokuba fanboy osemsebenzini andixelele malunga namava omsebenzisi alungileyo, acothayo, angalunganga, ii-conatantes FC, usetyenziso lwalungenantlonelo, ngaphandle kwemidlalo.
Kodwa akukho nto ebomini ihlala ifana kwaye ngelixa iApple iphumle kubunewunewu bayo kwaye akukho nto iguqukileyo kwinkqubo, yonke into kufuneka kuthiwe ihlala isebenza kwaye isebenza ngokugqibeleleyo, ukusukela ekuzalweni kwayo ngo-2007, i-Android iguqukile kakhulu, iphumelela ukukhula, ubumanzi nozinzo ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba phakathi kwenqaku lam 2 kunye nele-5 yam andiboni mahluko kubumanzi: AKUKHO. Ukuba songeza kuloo nto ivenkile yokudlala sele inezicelo zomgangatho kunye nobungakanani obufana nevenkile yevenkile (ngaphandle kwemidlalo apho isengukumkani) iziphumo zicacile: zonke izinto zilingana, ukusilela kwemida ye-Android kwenza umahluko Ndihlala ndibonelela ngombono wam ngamava omsebenzisi aphezulu.
Nangona kunjalo, omnye uyaqhubeka nokufunda: bendikwi-android kwaye ayinanto yakwenza nayo ... kwaye uyazibuza ukuba abantu abaqondi ukuba izinto ziyatshintsha kwaye nangona oko ukuvezileyo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kunokuba yinyani, ngoku akunjalo kunyanzelekile ukuba ubenjalo.
Masibe nethemba lokuba iApple iyayilungisa ikhosi kwaye iqale ukuqonda ukuba phakathi ku-2013 i-smartphone ayinakuba nemida ios ekhoyo namhlanje, ezo zithintelo ezenza abantu abaninzi ukuba babe neenqobo kunye nobuntu (phakathi kwayo no-Woz ngokwakhe angabandakanywa) baqonde ukuba ishiywe, ayithethi nto ininzi (ngokoluvo lwam ngokungalunganga): iphelelwe lixesha, kodwa into esele ngasemva.
I-Jsilbreak ayivunywanga yiapile siwela kokungekho mthethweni. Kwelinye icala, kwi-Android ndiyasithanda isicelo esivela kumhlobo kwaye undinika i-apk ngeBluetooth (kufa umona, i-Android isentlalontle).
Kulabo bagqabaza ukuba ios iyakhawuleza kuba i-Android yam iyakhawuleza kunePC yam (i-nexus 4). Ios iyakhawuleza ukwenza ntoni, akukho nto? Isantya senkqubo enomda, woow
Ndihambile kwi-iPhone ndaya kwi-Android, kwaye ndonwabile ngokubanzi ngotshintsho, kodwa kuyinyani ukuba iJailbreak ngumzuzwana ngelixa ingcambu inzima kakhulu. Kwaye nabani na othetha ngenye indlela uyaxoka okanye ungazi nto othetha engazi.
Konke kuxhomekeke kwitheminali ye-Android onayo, umzekelo, ingcambu ye-Nexus okanye i-Galaxy ilula.